စားစရာဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက် နေသဖြင့် ရှောင်တိမ်းရင်း ဝရမ်းကလည်း အထုတ် ခံထားရ ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ…. – Shwe Naung
စားစရာဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက် နေသဖြင့် ရှောင်တိမ်းရင်း ဝရမ်းကလည်း အထုတ် ခံထားရ ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ….
ပရိတ်သတ်ကြီရေ….ဖေ့စ်ဘုတ် ဆယ်လီ ကျော်ကျော်နန္ ဒကတော့နွေဦး တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်ဖို့ အတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင်အားဖြည့် ခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
တတ်နိုင် သလောက် အင်တိုက် အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့​ ကျော်ကျော်နန္ ဒကတော့ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေး ယူခံထားရတာကြောင့် လတ်တလောမှာ ရှောင်ပုန်း နေရပြီး နေရေးစားရေး အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ နေရကာ အကူအညီတွေ တောင်းခံလာ ပါတယ်..
“ရှောင်ပုန်းနေရ တဲ့ဘဝမှာ နေစရာ စားစရာ ခက်ခဲ့လာတယ်ဗျာ တကယ်ကူညီချင် တဲ့သူတွေရှိမှာပါ Wave money- 09400400010
KBZ pay – 09788880070 KBZ Account No- 21430199911580301..” ဆိုပြီး ရေးသား အကူအညီ တောင်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အဲ့ဒီပို့စ်အောက် မှာတော့ ကျော်ကျော်နန္ဒက အခပ်အခဲဖြစ်နေလို့ သူကိုယ်တိုင် အကူအညီ တောင်းထားတာဖြစ်ပြီး Acc အဟက်ခံရတာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကျေးဇူးတင် စကားကိုလည်း ဆိုထား ပါသေးတယ်..။
ပြည်သူပရိသတ် တွေကလည်း အရင်ကတော့ ကျော်ကျော်နန္ဒကို ဝေဖန်အပြစ်တင် ပြောဆိုကြပေမယ့် အချိန်မှာ အားပေးဝန်းရံပေးပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီနေကြ တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ကျော်ကျော်နန္ဒ ကတော့ အခုလိုဒုက္ခရောက်ပြီး အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကူညီပေး ကြသူတွေငို သူလွတ်မြောက်လာတဲ့ တစ်နေ့ကျရင် Fb Page ကနေ Live လွှင့်ပေးသွားမယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပြထားပါတယ်..။ဖတ်ရှုပေတဲ့ ပရိတ်သတ် ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အသည်းယားစရာ ဖက်ရှင်အလှလေး နဲ့ မောင်လေးအမော တွေပြေဖို့ ဆိုပြီးချ ပြလာ တဲ့ M ဆိုင်းလု
မြန်မာ ၀တ်စုံလေးနဲ့ မျက်၀န်းရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အလှတရား ပုံရိပ်များ…….